ISIOKWU TETA! A Baịbụl Ọ̀ Pụrụ Iche n’Eziokwu?
IHE NDỊ GA-ENYERE EZINỤLỌ AKA Nyere Nwa Gị Aka Ka Ọ Mata Mgbanwe Ndị A Na-enwe n’Ahụ́
INTERVIEW Otu Ọkachamara Kwuru Ihe Mere O Ji Kwere na Chineke
THE BIBLE'S VIEWPOINT Nchegbu
WATCHING THE WORLD Akụkọ Gbasara Mmekọrịta Mmadụ na Ibe Ya
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Myanmar Nepali Ngangela Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Urdu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Teta! | Nke 2 n'Afọ 2016
A mụọ nwa, ọ naghị ara ahụ́ ya etoo, nwa ahụ e kubu n’aka achụwa afọ iri. Ọ bụ eziokwu na ọ ka bụ nwatakịrị, ma, o nwere ike ịbụ na o toruwela oge ahụ́ ya ga-amalite ịgbanwe.
Olee otú ị ga-esi enyere ya aka n’oge a ọ na-etolite, bụ́ mgbe mgbanwe ndị ọ na-ahụ n’ahụ́ ya ga na-enye ya nsogbu n’obi?
Ahụ́ mmadụ niile abụghị otu. Ahụ́ nwatakịrị nwere ike ịmalite ịgbanwe mgbe ọ dị naanị afọ asatọ. O nwekwara ndị nke ha na-amalite mgbe ha ruru afọ iri na ise ma ọ bụ karịa. Otu akwụkwọ kwuru na oge mgbanwe ahụ na-amalite na-adịgasị iche iche.
Mgbanwe ahụ nwere ike ime ka ọ na-echegbu onwe ya. Ndị nọ́ n’oge uto na-echekarị gbasara otú ndị ọzọ ga-esi na-ele ha anya. Otu nwatakịrị aha ya bụ Emeka * kwuru na ihe banyere otú ahụ́ ya dị na otú o sizi akpa àgwà nọ́ na-eche ya uche. O kwukwara na ya na-echekarị na ndị ọzọ na-ewere ya ka onye gbapụrụ iche. Mgbanwe ndị ahụ na-eme ihere, ma, ihere ahụ na-akadị njọ ma ihe tokasịwa onye ahụ n’ihu. Otu nwatakịrị nwaanyị dị́ afọ iri na asaa aha ya bụ Ngozi kwuru na ya chere na ihu ya agbachaala ọkụ. O kwukwara na ya na-ebekarị ákwá ma na-agwa onwe ya na ya ajọọla njọ.
Ọ naghị adịrị ndị nke ha bidoro ngwa ngwa mfe. Ọ bụ ụmụ nwaanyị ka ọ na-akacha enye nsogbu n’obi. E nwere ike ịna-ama ha njakịrị na ha akpụwala ara ma ọ bụkwanụ na ha aghọọla agbọghọ n’ike. Otu akwụkwọ e dere maka ndị nne na nna kwuru na ọ bụ ụdị mgbanwe a na-eme ka ụmụ okorobịa chọwa imebi ha.
Ọ pụtaghị na ọ marala ihe. Ilu 22:15 kwuru na ọ bụ “nzuzu ka e kekọtara ya na obi nwata.” Mgbanwe ndị ahụ agaghị agbanwe àgwà ya. O nwere ike ịdị gị ka nwa gị ò toola. Ma, otu akwụkwọ kwuru na uto ahụ abụghị ya ga-eme ka ọ mụta ime mkpebi dị́ mma, kpawa àgwà ọma, mụta ịna-ejide onwe ya, ma ọ bụkwanụ kpawa àgwà ndị ọzọ e ji ama na mmadụ etoola.
Gwa ya gbasara ya tupu nke ya amalite. Nyere nwa gị aka ka ọ ghọta ihe ọ na-aga ịhụ. Otu ihe dị́ mkpa ị ga-akọwara nwa gị nwaanyị bụ gbasara nwaanyị ịhụ nsọ ya. Ị ga-akọwakwara nwa gị nwoke gbasara ọbara ọcha na-agbapụta ụmụ nwoke n’ahụ́. Ihe abụọ a adịghị ka mgbanwe ndị nke ọzọ, ha na-amalite na mberede. Ha nwere ike ịgbagwoju nwa gị anya, meekwa ka obi wụnye ya n’afọ. Ị kọwawara ya ihe ndị a, mee ka ọ ghọta na mgbanwe ndị ahụ bara uru, na ha bụ ihe na-egosi na mmadụ etowela.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Abụ Ọma 139:14.
Ezorola ya ihe ọ bụla. Otu nwa okorobịa aha ya bụ Okorie kwuru na papa ya na mama ya zochiiri ya ihe ụfọdụ mgbe ha na-akọrọ ya gbasara mgbanwe ndị ọ ga-ahụ n’ahụ́ ya. O kwukwara na ha gaara aka enyere ya aka ma a sị na ha kpọọrọ ya okwu aha. Otu nwa agbọghọ dị́ afọ iri na asaa aha ya bụ Adanna kwukwara ihe yiri ihe a Okorie kwuru. Ọ sịrị na mama ya kọọrọ ya gbasara mgbanwe ndị ahụ, kwuokwa na mama ya gaara akọwara ya ihe niile iji nyere ya aka. Okwu gbasara mgbanwe ndị a anaghị adị mfe okwukwu, ma, gbalịa kọwaara nwa gị ihe niile dị́ na ya.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ọrụ Ndịozi 20:20.
Jụọ ya ajụjụ ga-eme ka o kwuo obi ya. Jiri aka gị kwulite okwu gbasara mgbanwe ndị ọzọ hụrụ n’ahụ́ ha. Dị ka ihe atụ, i nwere ike ịjụ nwa gị nwaanyị sị: “Ò nweela nwa klas unu kwutere okwu gbasara ịhụ nsọ ya?” “Ụmụ akwụkwọ unu hà na-achị ụmụ nwaanyị ndị mgbanwe nke ha bidoro ngwa ngwa ọchị?” I nwere ike ịjụ nwa gị nwoke, sị: “Ụmụ akwụkwọ unu hà na-achị ụmụaka ibe ha yiri ka ha anaghị eto eto ọchị?” Ọ bụrụ na i si otú a mee ka nwa gị bido ịkọrọ gị gbasara ndị ọzọ, ọ ga-adịziri ya mfe ịkọrọ gị gbasara onwe ya. Ọ kọwara gị ya, gbaa mbọ ka ị bụrụ “onye na-anụ ihe ngwa ngwa, onye na-adịghị ekwu okwu ngwa ngwa.”—Jems 1:19.
Nyere nwa gị aka ka o nwee “ezi amamihe na ikike iche echiche.” (Ilu 3:21) Ọ bụghị naanị ahụ́ mmadụ na otú obi na-adị ya na-agbanwe ma o tolitewe. Mgbanwe ndị ahụ nwa gị ga-enwe ga-enyekwara ya aka ịma otú ọ ga-esi na-eme mkpebi ndị bara uru ma o too. N’ihi ya, i kwesịrị iji oge ahụ nyere ya aka ka ọ mụta ịna-eme ihe dị́ mma.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ndị Hibru 5:14.
Ike agwụla gị. Ọtụtụ ndị na-eto eto anaghị emepeli ọnụ agwa papa ha ma ọ bụ mama ha gbasara mgbanwe ndị ha na-ahụ n’ahụ́ ha. Ma, echekwala na ikwu gbasara ya agaghị amasị ha. Otu akwụkwọ kwuru na ihe niile nne na nna na-agwa nwa ha nwere ike na-aba nwa ahụ n’isi, ma, ya ana-eme ka à ga-asị na ọ naghị aghọta ihe ahụ a na-agwa ya.
“I kere m n’ụzọ dị egwu, dịkwa ebube.”—Abụ Ọma 139:14.
‘Alaghị m azụ ịgwa unu nke ọ bụla n’ime ihe ndị bara uru.’—Ọrụ Ndịozi 20:20.
‘Ndị tozuru okè na-azụ ikike nghọta ha azụ ịmata ihe dị iche n’ihe ziri ezi na ihe na-ezighị ezi.’—Ndị Hibru 5:14.
Otu nwa agbọghọ dị́ afọ iri na isii aha ya bụ Chioma kwuru, sị: “Papa m na mama m nyeere m ezigbo aka mgbe ahụ́ m malitere ịgbanwe. Ma, mama m kacha nyere m aka. Ọ kọwaara m ihe niile. M nọ na-atụ anya mgbanwe ndị ahụ, ha emeghị m na mberede. Nke ka nke bụ na mama m mere ka ọ dịrị m mfe ịkọrọ ya otú ihe si na-aga. Ha mere ka mgbanwe ndị ahụ na-emenye mmadụ ihere ghara ịna-echu m ụra.”
Nwa agbọghọ ọzọ dị́ afọ iri na asatọ aha ya bụ Ugochi kwuru, sị: “Papa m na mama m nyeere m aka. Dị ka ihe atụ, ha anaghị aga akọrọ ndị ọzọ gbasara otú ahụ́ m si na-agbanwe ebe ọ bụ na ha ma na mgbanwe ndị ahụ na-eme m ihere. Ihe ahụ ha mere nyeere m ezigbo aka. Ha gbara mbọ kọwaara m gbasara mgbanwe ndị ahụ tupu mụ ahụwa ha.”
Ì nwere nwa dị afọ iri na ụma? Ọ bụrụ na i nwere, olee otú ị ga-esi zụọ ya ka o mechaa bụrụ dimkpa ma ihe?
Nke 2 n'Afọ 2016 | Baịbụl Ọ̀ Pụrụ Iche n’Eziokwu?
TETA! Nke 2 n'Afọ 2016 | Baịbụl Ọ̀ Pụrụ Iche n’Eziokwu?
Ihe Ga-enyere Gị Aka Mgbe Ahụ́ Gị Na-agbanwe